3 Ezigbo Ihe Mere Roulette bụ Oké Egwuregwu Egwuregwu na Casinos | Penguin Blog - pisklak.net
3 Ezigbo Ihe Mere Roulette bụ Oké Egwuregwu Egwuregwu na Casinos | Penguin Blog
3 Ezigbo Ihe Mere Roulette bụ Oké Egwuregwu Egwuregwu na Casinos
N’agbanyeghi ihe kpatara ya, egwuregwu cha cha cha cha ga – enweta ihe ojoo n’etiti usoro ịgba chaa chaa nke “dị oke egwu”, ndị egwuregwu na-ahọrọ mmetụta dị iche iche nke egwuregwu egwuregwu dịka blackjack.
Gee ntị, m ghọtara nke ọma na ịgafe bọl gburugburu wiilị na ịkọ nkọ ebe ọ ga-ada bụ ezigbo egwuregwu nke ohere. Mana ihe roulette enweghị na usoro bụ karịa ị mepụta uru ntụrụndụ site n’echiche nke onye ịgba chaa chaa. Ọ bụrụ n’inwetụbeghị roulette mmaji mara mma, lee 5 ezigbo ihe kpatara ị ga-eji wee nwee ọ enjoyụ.
1 – Roulette bụ otu n’ime egwuregwu cha cha kachasị mfe iji mụta na igwu egwu.
Ọ bụrụ n’ịmara ịtụgharị mkpụrụ ego ma kpọọ isi ma ọ bụ ọdụ, mgbe ahụ ị nwere ike ịmụ etu esi egwu roulette. Egwuregwu bụ isi nke egwuregwu ahụ na-ajụ onye ọkpụkpọ ahụ ka ọ maa ma bọl ahụ ọ ga-ada na mpaghara ọbara ọbara ma ọ bụ oji. N’ezie, roulette nwere ihe omimi karịa ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ “ma ọ bụ” ma ọ bụ “ịkụ nzọ. Ma uhie ma ọ bụ oji bụ ihe bụ isi.
Ọ bụrụ na ị hụtụbeghị tebụl roulette, lee usoro ịkụda ngwa ngwa na ịtọlite ​​eriri. Ga – ahụ oghere 37 ma ọ bụ 38 (karịa na otu nkeji), yana ọtụtụ ọnụọgụ dị n’agbata 1 na 36 kpọrọ nke ọ bụla.
2 – betsgba otu nọmba bụ otu n’ime obi ụtọ ịgba chaa chaa.
Iji nweta ego iri atọ na ise ruo 1, ị ga-eche ọnụego ole bọọlụ ga – ejedebe. Nke ahụ chọrọ iku ume siri ike, ịkụ otu ọnụ ọgụgụ na wiilị efu efu nwere ihe nwere ike ịbụ naanị 2.63%, mana nwoke ahụ bụ ihe nrite maka ọdịmma, ee dị ụtọ! Ewezuga egwuregwu igwe dị ka oghere na vidiyo vidio, ị gaghị ahụ ọnụego ịkwụ ụgwọ na 35 ka 1 dị na egwuregwu cha cha ndị ọzọ.
O doro anya na ịchụ ihe 2.63% gbara ọsọ bụ nke a na-enweghị ike ị nweta na ogologo oge, yabụ ndị egwuregwu roulette na-agbasa ọtụtụ obere nzọ na nọmba ọkacha mmasị ha. N’ezie, ị ga – ahụ ụfọdụ ndị egwuregwu ka ha na – agbakwunye ibe ha gburugburu na ọtụtụ ọnụọgụ dị iche iche.
Onwe m, achọrọ m ịdọ aka na ntị site na ịkụ nzọ ruru nọmba pụrụ iche ise na ntụgharị ọ bụla. Ma ọ bụ ntakịrị ihe dị iche na naanị ịkụ nzọ na oghere “0” ma ọ bụ “00”, yabụ ha bụ ndị na-eme mmemme mgbe mmadụ tufuru uwe elu ha.
3 – Roulette na-enye ndị egwuregwu mmefu ego iji rụọ ọrụ.
Imirikiti casinos Las Vegas na-eji opekata mpe $ 5 maka egwuregwu okpokoro dị ka blackjack ma ọ bụ kaadị kaadi atọ. Ma n’ezie, isi ebe ntụrụndụ na Strip na-eji otu njedebe $ 5 dịka Roulette.
Mana ka ị na-achọ naanị ị nweta blackjack aka. Mana Roulette na-ahapụ gị ka ị gbasaa nzọ ahụ pere mpe nke kachasị nke nzacha ise site na iji ibe $ 1.
El Cortez, nke dị na Downtown Vegas na South Point, nke dị kilomita ole na ole site na ndịda nke warara, bụ ebe dịkarịa ala obere dọkụmentị $ 1.